Abofra Samuel Nyinii Wɔ Asɔrefie Hɔ | Gyidi a Edi Mũ
‘Onyinii Yehowa Anim’
1, 2. Tebea bɛn mu na Samuel kasa kyerɛɛ Israelfo no, na dɛn nti na na ɛsɛ sɛ ɔboa wɔn ma wɔsakra wɔn adwene?
SAMUEL hwɛɛ ne nkurɔfo no anim. Ná ɔbarima nokwafo yi a wasom sɛ odiyifo ne ɔtemmufo mfe pii no ama wɔahyiam wɔ Gilgal kurow no mu. Sɛ ɛyɛ ɛnnɛ mmere yi a, anka ɛbɛyɛ May anaa June mu; ná ɔpɛ asi akyɛ. Ná awi a ɛwɔ mfuw a ɛwɔ ɔmantam no mu no ahoa sɛ wotwa. Nnipadɔm no nyinaa yɛɛ komm. Ná Samuel bɛyɛ dɛn atumi akasa ma aka wɔn koma?
2 Ná nkurɔfo no ntumi nhu sɛ tebea a wɔwom no yɛ aniberesɛm. Ná wɔaka no denneennen sɛ wɔpɛ sɛ onipa di wɔn so hene. Ná wonnim sɛ wɔabu wɔn Nyankopɔn, Yehowa, ne ne diyifo no animtiaa kɛse. Ɛyɛ Yehowa ankasa na na wɔrepo no sɛ wɔn Hene! Dɛn na na Samuel betumi ayɛ ma wɔasakra wɔn adwene?
Ɛwom sɛ ɔbrasɛe atwa yɛn ho ahyia de, nanso yebetumi asua Yehowa mu gyidi a yebenya ho ade pii afi nea Samuel yɛe wɔ ne mmofraase no mu
3, 4. (a) Dɛn nti na Samuel kaa ne mmofraase ho asɛm? (b) Dɛn nti na gyidi a Samuel daa no adi no so wɔ mfaso ma yɛn nnɛ?
3 Samuel kasae. Ɔka kyerɛɛ nnipadɔm no sɛ: “Mabɔ akora na mafuw dwen.” Samuel atifi dwen no maa nkurɔfo no faa asɛm a ɔreka no aniberesɛm. Afei ɔkae sɛ: “Mifi me mmofraase anantew mo anim de abedu nnɛ.” (1 Sam. 11:14, 15; 12:2) Ɛwom sɛ na Samuel abɔ akwakoraa de, nanso na ne werɛ mfii ne mmofraase. Ná ɔda so ara kae nsɛm a esisii wɔ ne mmofraase no paa. Ná gyinae a osisii bere a na ɔyɛ abarimaa no ama ɔde gyidi ne ahofama asom ne Nyankopɔn Yehowa.
4 Ɛwom sɛ mpɛn pii no, nnipa a na wonni gyidi na wonni nokware na na wɔatwa Samuel ho ahyia de, nanso ɔhyɛɛ ne gyidi den, na ɔkɔɔ so dii nokware. Ɛnnɛ nso, ɛnyɛ mmerɛw sɛ yɛbɛhyɛ yɛn gyidi den, efisɛ yɛte wiase a emufo nni gyidi na wɔn bra asɛe mu. (Monkenkan Luka 18:8.) Momma yɛnhwɛ nea yebetumi asua afi Samuel nhwɛso no mu; momma yɛmfa mfi ne mmofraase.
‘Ɔsomee Wɔ Yehowa Anim, ná Ɔyɛ Abofra’
5, 6. Ɔkwan bɛn so na na Samuel mmofraberem yɛ soronko, nanso dɛn nti na na n’awofo wɔ awerɛhyem sɛ wɔbɛhwɛ no yiye?
5 Ná Samuel mmofraberem yɛ soronko. Bere a wotwaa no nufu akyi bere tiaa bi a na ɛbɛyɛ sɛ wadi mfe abiɛsa anaa nea ɛboro saa kakra no, ofii ne som adwuma ase wɔ Yehowa asɔrefie kronkron a na ɛwɔ Silo a efi Rama rekɔ hɔ bɛyɛ kilomita 30 no. Elkana ne Hana a wɔyɛ Samuel awofo no de wɔn ba no maa Yehowa sɛ ɔnsom wɔ ɔkwan soronko so, na ɔyɛɛ Nasirini ne nkwa nna nyinaa. * So eyi kyerɛ sɛ Samuel awofo poo no a na wɔnnɔ no?
6 Ɛnte saa koraa! Ná wonim sɛ wɔbɛhwɛ wɔn ba no yiye wɔ Silo. Akyinnye biara nni ho sɛ, Ɔsɔfo Panyin Eli na ɔma wɔhwɛɛ Samuel, efisɛ ɔne no bɔɔ mu yɛɛ adwuma. Ná mmea bi nso yɛ ɔsom adwuma wɔ asɔrefie hɔ, na ɛda adi sɛ na wɔn mu biara wɔ adwuma a ɔyɛ.—Ex. 38:8; Atem. 11:34-40.
7, 8. (a) Dɛn na Samuel awofo fi ɔdɔ mu yɛe de hyɛɛ no nkuran afe biara? (b) Dɛn na awofo a wɔwɔ hɔ nnɛ betumi asua afi Samuel awofo hɔ?
7 Afei nso, Hanah ne Elkana werɛ amfi wɔn abakan a na ɔda wɔn koma so a wɔbɔɔ n’awo ho mpae ansa na wɔrenya no no da. Ná Hanah asrɛ Onyankopɔn sɛ ɔmma no ɔbabarima, na ɔhyɛɛ bɔ sɛ ɔde no bɛma Onyankopɔn ma ɔde ɔsom kronn ama no. Sɛ na Hanah rekɔsra Samuel afe biara a, na ɔde atade nsasin foforo a wapam a na ɔde bɛyɛ ɔsom adwuma wɔ asɔrefie hɔ kɔma no. Ɛda adi sɛ na abarimaa no ani gye nsrahwɛ a ɛte saa no ho. Akyinnye biara nni ho sɛ, n’ani gyee nkuranhyɛ ne akwankyerɛ a n’awofo fi ɔdɔ mu de maa no no ho bere a wɔma ohuu hokwan a wanya sɛ ɔresom Yehowa wɔ asɔrefie hɔ no.
8 Awofo a wɔwɔ hɔ nnɛ betumi asua nneɛma pii afi Hanah ne Elkana hɔ. Awofo taa de wɔn adwene nyinaa si honam fam nneɛma a wɔbɛma wɔn mma nsa aka so, na wobu wɔn ani gu hia a ehia sɛ wɔboa wɔn mma ma wɔbɛn Yehowa no so. Nanso, Samuel awofo de, wɔde abusuabɔ a wɔne Yehowa benya dii kan wɔ wɔn asetena mu, na ɛno boaa wɔn ba no paa ma onyin bɛyɛɛ sɛnea na ɔte no.—Monkenkan Mmebusɛm 22:6.
9, 10. (a) Ka asɔrefie no ne sɛnea na abarimaa Samuel te nka wɔ ho no ho asɛm. (Hwɛ ase hɔ asɛm no nso.) (b) Nnwuma bɛn na ɛbɛyɛ sɛ na Samuel yɛ wɔ asɔrefie hɔ, na wususuw sɛ dɛn na mmofra a wɔwɔ hɔ nnɛ betumi ayɛ de asuasua ne nhwɛso no?
9 Yebetumi atwa bere a na abofra no renyin na ɔredi aforosian wɔ mmepɔw a atwa Silo ho ahyia no so na ɔrehwehwɛ hɔ no ho mfonini wɔ yɛn adwenem. Sɛ na ɔto n’ani hwɛ kurow a egu bepɔw so ne obon a ɛda kurow no fã no a, ɛda adi sɛ na n’ani gye kɛse, na na ɔhoahoa ne ho bere a ohu Yehowa asɔrefie no. Ná saa asɔrefie no yɛ kronkron ampa. * Mose ankasa na ɔde akwankyerɛ mae ma wosii asɔrefie no bɛyɛ mfe 400 a na atwam no, na wɔ wiase nyinaa no, ɛhɔ ne beae a na wɔde ɔsom kronn ma Yehowa.
10 Bere a abarimaa Samuel renyin no, n’ani begyee asɔrefie hɔ. Ɔkae wɔ asɛm bi a ɔkyerɛwee akyiri yi mu sɛ: “Samuel somee wɔ Yehowa anim; ná ɔyɛ abofra a ɔhyɛ nwera asɔfotade.” (1 Sam. 2:18) Saa atade nguguso a na Samuel hyɛ no yɛ adanse a ɛkyerɛ sɛ na ɔboa asɔfo no wɔ asɔrefie hɔ. Ɛwom sɛ na Samuel nka asɔfokuw no ho de, nanso na nnwuma a ɔyɛ no bi ne sɛ obuebue apon a wɔfa mu kɔ asɔrefie hɔ no anɔpa, na na ɔboa Eli a na wabɔ akwakoraa no. Ná n’ani gye adwuma a ɔreyɛ wɔ asɔrefie hɔ no ho de, nanso bere kɔɔ so no, nneɛma fii ase haw no. Ná bɔne kɛse bi rekɔ so wɔ Yehowa fie hɔ.
Ɔmaa ne Ho Tewee, Ɛmfa Ho sɛ na Ɔbrasɛe Atwa Ne Ho Ahyia
11, 12. (a) Bɔne kɛse bɛn na Hofni ne Pinehas yɛe? (b) Abɔnefosɛm ne ɔbrasɛe bɛn na Hofni ne Pinehas de wɔn ho hyɛɛ mu wɔ asɔrefie hɔ? (Hwɛ ase hɔ asɛm no nso.)
11 Samuel huu abɔnefosɛm ne ɔbrasɛe ankasa fii ne mmofraase pɛɛ. Ná Eli wɔ mmabarima baanu a wɔn din de Hofni ne Pinehas. Kyerɛwtohɔ a Samuel yɛe no ka sɛ: “Ná Eli mma no yɛ mmarima ahuhufo; ná wommu Yehowa.” (1 Sam. 2:12) Nsɛmpɔw abien a ɛwɔ saa kyerɛwsɛm yi mu no biako nnkɔ nnyaw biako. Ná Hofni ne Pinehas yɛ “mmarima ahuhufo”—nea ɛkyerɛ ankasa ne “mma a mfaso biara nni wɔn so”—efisɛ na wommu Yehowa. Ná wɔmmfa Yehowa gyinapɛn ne n’akwankyerɛ a ɛteɛ no nnyɛ hwee. Ɛno ma wɔyɛɛ bɔne ahorow pii.
12 Onyankopɔn Mmara no kaa adwuma a na asɔfo no yɛ ne ɔkwan a na ɛsɛ sɛ wɔfa so bɔ afɔre wɔ asɔrefie hɔ no ho asɛm pefee. Biribi nti na Onyankopɔn yɛɛ saa! Ná saa afɔre ahorow a wɔbɔ no yɛ nsiesie a Onyankopɔn ayɛ a ɔnam so de bɔne kyɛ sɛnea ɛbɛyɛ a nkurɔfo ho betumi atew wɔ n’anim na wɔafata sɛ wonya ne nhyira ne n’akwankyerɛ. Nanso, Hofni ne Pinehas dii wɔn mfɛfo asɔfo anim ma wobuu afɔre ahorow a na wɔbɔ no animtiaa kɛse. *
13, 14. (a) Ɔkwan bɛn so na nneɛma bɔne a na ɛrekɔ so wɔ asɔrefie hɔ no kaa komapafo a na wɔba hɔ no? (b) Ɔkwan bɛn so na Eli anyɛ n’adwuma yiye sɛ agya ne ɔsɔfo panyin?
13 Wo de, yɛ abofra Samuel a wahu sɛ nneɛma bɔne a ɛte saa rekɔ so nanso obiara nka ho hwee ma enti ne ho adwiriw no no ho mfonini hwɛ. Nnipa dodow ahe na ohuu wɔn sɛ wɔreba saa asɔrefie kronkron hɔ a na wɔhwɛ kwan sɛ wobenya awerɛkyekye ne denhyɛ afi Onyankopɔn hɔ, nanso wobefi hɔ no, na wɔn abam abu, wɔadi yaw, anaasɛ wɔama wɔn anim agu ase? Ná nnipa a wɔba hɔ no mu bi yɛ ahiafo, mmɔborɔfo, ne wɔn a wɔhyɛ wɔn so. Na Samuel tee nka dɛn bere a ohui nso sɛ Hofni ne Pinehas mmfa Yehowa mmara a ɛfa ɔbarima ne ɔbea nna ho no nnyɛ hwee, na wɔne mmea a wɔsom wɔ asɔrefie hɔ deda no? (1 Sam. 2:22) Ebia na ɔhwɛ kwan sɛ Eli bɛyɛ nea ɛrekɔ so no ho biribi.
Ɛbɛyɛ sɛ nneɛma bɔne a na Eli mma no reyɛ a Samuel hui no haw no paa
14 Eli na na obetumi asiesie ɔhaw a na ɛrekɔ so no. Esiane sɛ na ɔyɛ ɔsɔfo panyin nti, ɔno na na nea ɛrekɔ so wɔ asɔrefie hɔ biara da no so. Sɛ́ agya no, na ɛyɛ n’asɛyɛde sɛ ɔteɛ ne mma no so, efisɛ na wɔrepira wɔn ankasa ho ne asase no sofo pii. Nanso, Eli antumi anni n’asɛyɛde sɛ agya ne ɔsɔfo panyin no ho dwuma. Wanka ne mma no anim anibere so. (Monkenkan 1 Samuel 2:23-25.) Nanso, na ne mma no hia animka a emu yɛ den paa. Ná wɔreyɛ bɔne a ɛfata sɛ wokum wɔn!
15. Nkrasɛm a emu yɛ den bɛn na Yehowa de kɔmaa Eli, na dɛn na Eli abusua no yɛe wɔ kɔkɔbɔ no ho?
15 Asɛm no sɛee koraa kosii sɛ Yehowa somaa “Onyankopɔn nipa,” odiyifo bi a wɔammɔ no din ma ɔde atemmusɛm bi a emu yɛ den kɔmaa Eli. Yehowa ka kyerɛɛ Eli sɛ: “Wudi wo mma ni sen me.” Enti Onyankopɔn hyɛɛ nkɔm sɛ, Eli mma nnebɔneyɛfo no bewu da koro, na Eli abusua no behu amane kɛse ma asɔfodi no mpo afi n’abusua no mu. So saa kɔkɔbɔ a emu yɛ den yi maa abusua no yɛɛ nsakrae bi? Kyerɛwnsɛm no ma yehu sɛ wɔanyɛ nsakrae biara.—1 Sam. 2:27–3:1.
16. (a) Amanneɛbɔ bɛn na yɛkenkan fa abofra Samuel nkɔso ho? (b) So saa amanneɛbɔ no ka wo koma? Kyerɛkyerɛ mu.
16 Ɔkwan bɛn so na saa ɔbrasɛe a na ɛrekɔ so yi nyinaa kaa abofra Samuel? Wɔ saa mmere bɔne yi mu no, yehu sɛ na nneɛma pa bi rekɔ so; yɛte asɛmpa bi fa Samuel nyin ne ne nkɔso ho. Kae sɛ yɛkenkan wɔ 1 Samuel 2:18 sɛ Samuel de nokwaredi “somee wɔ Yehowa anim; ná ɔyɛ abofra.” Wɔ Samuel mmofraase pɛɛ mpo no, ɔde n’adwene sii Onyankopɔn som so. Yɛkenkan asɛm bi a ɛka koma kɛse paa wɔ 1 Samuel 2:21 sɛ: “Abofra Samuel nyinii Yehowa anim.” Bere a ɔrenyin no, abusuabɔ a ɛwɔ ɔne ne soro Agya no ntam no mu yɛɛ den kɛse. Akyinnye biara nni ho sɛ, abusuabɔ a emu yɛ den kɛse saa a obi ne Yehowa benya no ne ade a ebetumi abɔ no ho ban afi ɔbrasɛe biara ho.
17, 18. (a) Sɛ Kristofo a wɔyɛ mmabun hyia ɔbrasɛe ho sɔhwɛ a, dɛn na wobetumi ayɛ de asuasua Samuel nhwɛso no? (b) Dɛn na ɛkyerɛ sɛ Samuel faa ɔkwampa so?
17 Ná anka ɛrenyɛ den sɛ Samuel benya adwene sɛ sɛ ɔsɔfo panyin ne ne mma betumi ayɛ bɔne a, ɛnde ɔno nso betumi ayɛ nea ɔpɛ biara. Nanso, ɛnsɛ sɛ yɛde ɔbrasɛe a afoforo de wɔn ho hyɛ mu, a wɔn a wodi tumi ka ho no, yi yɛn ho ano na yɛyɛ bɔne da. Ɛnnɛ, mmabun a wɔyɛ Kristofo pii suasua Samuel nhwɛso no, na ‘wɔrenyin wɔ Yehowa anim’—bere mpo a nnipa binom a wɔatwa wɔn ho ahyia nyɛ nhwɛso pa no.
18 Dɛn na efii Yehowa asɛm a Samuel tiei no mu bae? Yɛkenkan sɛ: “Saa bere no nyinaa na abofra Samuel gu so renyin, na Yehowa ne nnipa nyinaa pɛɛ n’asɛm.” (1 Sam. 2:26) Enti na nnipa pii pɛ Samuel asɛm yiye, anyɛ yiye koraa no, wɔn a na wɔn ho hia no no. Nokware a na abarimaa yi di no maa Yehowa ankasa ani sɔɔ no. Ná Samuel nim sɛ nea ɛbɛyɛ biara no, Onyankopɔn bebu bɔne a na ɛrekɔ so wɔ Silo no nyinaa ho atɛn, nanso ebia odwinnwen bere a na ɛbɛba no ho. Anadwo bi, onyaa bere a na saa nneɛma bɔne no bɛba awiei no ho mmuae.
“Kasa, na W’akoa Retie”
19, 20. (a) Ka nea esii da koro anadwo dasum bi a na Samuel ada wɔ asɔrefie hɔ no ho asɛm. (b) Ná Samuel ne Eli asetena te dɛn? (d) Samuel yɛɛ dɛn huu onii a na ɔrefrɛ no no?
19 Ná ade reyɛ akye, nanso na esum da so wom; ná kanea kɛse a esi ntamadan no mu gya a na ɛrebubu n’ani no da so ara redɛw. Bere a na baabiara ayɛ dinn no, Samuel tee sɛ obi refrɛ no. Ná osusuw sɛ ɛyɛ Eli a saa bere no na wabɔ akwakoraa posoposo a na n’ani nhu ade papa no na ɔrefrɛ no. Samuel sɔree, na “otuu mmirika” kɔɔ akwakoraa no nkyɛn. So wubetumi atwa abarimaa no ho mfonini wɔ w’adwenem sɛ ne nan sisi fam na ɔde mmirika rekɔ Eli nkyɛn akobisa no nea ɔpɛ sɛ ɔyɛ ma no no? Ɛyɛ anigye sɛ wubehu sɛnea Samuel daa obu ne ayamye adi kyerɛɛ Eli no. Ɛmfa ho bɔne a na Eli ayɛ nyinaa no, na ɔda so ara yɛ ɔsɔfo panyin a Yehowa apaw no.—1 Sam. 3:2-5.
20 Samuel nyanee Eli kae sɛ: “Mini; worefrɛ me.” Nanso, Eli kae sɛ ɔmfrɛɛ no, na ɔmaa abofra no san kɔdae. Abofra no san tee ɛnne no mpɛn pii. Awiei koraa no, Eli huu nea na ɛrekɔ so no. Saa bere no, na Yehowa mfa anisoadehu anaa nkɔmhyɛsɛm mma ne nkurɔfo no, na ɛnyɛ den sɛ wubehu nea enti a na aba saa. Nanso, na Eli nim sɛ Yehowa na ɔresan akasa bio, na saa bere yi de, abarimaa yi na na ɔrekasa akyerɛ no! Eli ka kyerɛɛ Samuel sɛ ɔnsan nkɔda, na ɔkyerɛɛ no sɛnea sɛ ɔte ɛnne no bio a, onnye so. Samuel yɛɛ nea ɔka kyerɛɛ no no. Ankyɛ na ɔtee sɛ obi refrɛ sɛ: “Samuel, Samuel!” Afei, abofra no gyee so sɛ: “Kasa, na w’akoa retie.”—1 Sam. 3:1, 5-10.
21. Yɛbɛyɛ dɛn atumi atie Yehowa nnɛ, na dɛn nti na mfaso wɔ so sɛ yɛbɛyɛ saa?
21 Afei de, na Yehowa asan anya ɔsomfo wɔ Silo a otie n’asɛm. Samuel tiee Yehowa asɛm ne nkwa nna nyinaa. So wutie Yehowa bere nyinaa? Ɛho nhia sɛ yɛtwɛn sɛ yɛbɛte sɛ ɛnne soronko bi rekasa kyerɛ yɛn anadwo. Ɛnnɛ, Onyankopɔn nne wɔ hɔ ma yɛn bere nyinaa. Ɛwɔ n’Asɛm Bible a wɔakyerɛw awie no mu. Dodow a yetie Onyankopɔn asɛm na yɛde bɔ yɛn bra no, dodow no ara na yɛn gyidi bɛyɛ den. Saa ara na Samuel yɛe.
Ɛwom sɛ na Samuel suro de, nanso ɔde nokwaredi kaa Yehowa atemmusɛm no kyerɛɛ Eli
22, 23. (a) Ɔkwan bɛn so na asɛm a mfiase no na Samuel suro sɛ ɔbɛka no baa mu? (b) Ɔkwan bɛn so na Samuel kɔɔ so gyee din kɛse?
22 Asɛm a esii wɔ Silo saa anadwo no bɛyɛɛ ade titiriw wɔ Samuel asetena mu, efisɛ ɔne Yehowa benyaa abusuabɔ soronko bi; ɔbɛyɛɛ Onyankopɔn ankasa diyifo ne ne kasamafo. Mfiase no, na abofra no suro sɛ ɔbɛka asɛm a Yehowa ka kyerɛɛ no no akyerɛ Eli, efisɛ na saa asɛm no ne nea etwa to a ɛkyerɛ sɛ ɛrenkyɛ na nkɔm a wɔahyɛ atia saa abusua no abam. Nanso, Samuel nyaa akokoduru ka kyerɛɛ Eli, na Eli nso de ahobrɛase gyee Onyankopɔn atemmusɛm no toom. Ankyɛ koraa na asɛm biara a na Yehowa aka no baa mu: Israelfo ne Filistifo kɔkoe, wokum Hofni ne Pinehas nyinaa da koro, na bere a Eli tee sɛ wɔafa Yehowa apam Adaka kronkron no, ɔno nso wui.—1 Sam. 3:10-18; 4:1-18.
23 Nanso, Samuel kɔɔ so gyee din sɛ odiyifo nokwafo. Kyerɛwnsɛm no ka sɛ: “Yehowa dii n’akyi,” na ɛde ka ho sɛ, Yehowa maa nkɔm a Samuel hyɛe no nyinaa baa mu.—Monkenkan 1 Samuel 3:19.
“Samuel Su Frɛɛ Yehowa”
24. Bere kɔɔ so no, gyinae bɛn na Israelfo no sii, na dɛn nti na na ɛyɛ bɔne a emu yɛ duru?
24 So Israelfo no suasuaa nea Samuel yɛe no, na wɔbɛyɛɛ nnipa a wɔbɛn Yehowa na wodi nokware? Dabi. Bere kɔɔ so no, wosii gyinae sɛ wɔmpɛ sɛ odiyifo kɛkɛ bebu wɔn atɛn. Ná wɔpɛ sɛ wɔyɛ te sɛ aman a aka no, na wonya ɔhene a ɔyɛ onipa ma odi wɔn so. Yehowa maa Samuel yɛɛ nea wobisae no maa wɔn. Nanso, na ɛsɛ sɛ Samuel ma Israelfo no hu sɛ wɔayɛ bɔne a emu yɛ duru. Ná ɛnyɛ onipa bi na wɔrepo no, na mmom na ɛyɛ Yehowa ankasa! Enti, Samuel maa nkurɔfo no kohyiaa mu wɔ Gilgal.
Samuel bɔɔ mpae wɔ gyidi mu, na Yehowa maa aprannaa boboom de buaa ne mpaebɔ no
25, 26. Wɔ Gilgal no, dɛn na Samuel a na wabɔ akwakoraa no yɛe de boaa ne nkurɔfo no ma wohui sɛ wɔayɛ bɔne a emu duru atia Yehowa?
25 Momma yentie asɛm a ɔka kyerɛɛ Israelfo no wɔ Gilgal wɔ saa bere a na emu yɛ den no mu. Samuel a na wabɔ akwakoraa no kaee Israelfo no sɛnea na wadi nokware na wakura ne mũdi mu no. Afei, yɛkenkan sɛ: “Samuel su frɛɛ Yehowa.” Ɔsrɛɛ Yehowa sɛ ɔmma aprannaa mmobom.—1 Sam. 12:17, 18.
26 So na aprannaa bɛbobom wɔ ɔpɛ bere mu? Ná wɔntee asɛm a ɛte saa bi da! Nanso, sɛ nkurɔfo no mu binom adwenem yɛɛ wɔn nãã ketewaa bi anaasɛ wodii fɛw bi mpo a, ankyɛ koraa. Mpofirim ara na mununkum maa ewim yɛɛ kusuu. Mframa bɔɔ awi a na ɛwɔ mfuw mu no ma ɛka guu fam. Aprannaa no boboom denneennen. Na osu tɔe. Nkurɔfo no yɛɛ wɔn ade dɛn? Kyerɛwnsɛm no ka sɛ: “Ɔman no nyinaa suroo Yehowa ne Samuel kɛse.” Afei, nkurɔfo no hui sɛ wɔayɛ bɔne a emu yɛ duru.—1 Sam. 12:18, 19.
27. Yehowa te nka dɛn wɔ wɔn a wosuasua Samuel gyidi no ho?
27 Ná ɛnyɛ Samuel na waka atuatewfo no koma, na mmom na ɛyɛ ne Nyankopɔn, Yehowa. Samuel fi ne mmofraase nyaa ne Nyankopɔn mu gyidi kosii ne nkwakoraabere mu. Ɛde besi nnɛ, Yehowa nsesae. Ɔda so ara boa wɔn a wosuasua Samuel gyidi no.
^ nky. 5 Ná Nasirifo no hyɛ bɔ sɛ wɔrenyɛ nneɛma bi a emu bi ne sɛ wɔrennom nsã na wɔrenyi wɔn ti. Wɔn mu dodow no ara hyɛɛ saa bɔ no sɛ wobedi so akosi bere bi, nanso wɔn mu kakraa bi te sɛ Samson, Samuel, ne Yohane Suboni yɛɛ wɔn ho Nasirifo wɔn nkwa nna nyinaa.
^ nky. 9 Ná asɔrefie no tenten mu ware sen ne tɛtrɛtɛ mu, na na ɛyɛ ntamadan a ne nnyinaso yɛ nnua. Nanso, wɔde nneɛma a ɛyɛ fɛ paa te sɛ sukraman nhoma, ntama a wɔadi mu adwinni fɛfɛɛfɛ, ne nnua a ne bo yɛ den a wɔde dwetɛ ne sika kɔkɔɔ adura ho na esii. Wosii asɔrefie no ne afɔremuka kɛse bi a na wɔbɔ so afɔre no sii asase bi a na ne tenten mu ware sen ne tɛtrɛtɛ mu so. Akyiri yi, wosisii adan foforo wɔ ntamadan no nkyɛn a na asɔfo no de di dwuma. Ɛbɛyɛ sɛ saa adan no bi mu na na Samuel da.
^ nky. 12 Kyerɛwnsɛm no ma yehu nneɛma abien a wɔyɛe de kyerɛe sɛ na wommu ade koraa. Ade biako ne sɛ, Mose Mmara no kyerɛɛ afɔrebɔde no afã a na ɛsɛ sɛ wɔde ma asɔfo no ma wodi no mu pefee. (Deut. 18:3) Nanso, na asɔfo amumɔyɛfo no reyɛ biribi foforo koraa wɔ asɔrefie hɔ. Ná wɔma wɔn asomfo de adinam kɛse bi kɔbɔ dadesɛn a wɔrenoa nam wom no mu, na na nam pa biara a ɛde bɛba no na wɔafa akɔwe! Ade foforo nso ne sɛ, sɛ na nkurɔfo de afɔrebɔde ba sɛ wɔnhyew wɔ afɔremuka no so a, na asɔfo amumɔyɛfo yi ma ɔsomfo bi hunahuna nea ɔrebɛbɔ afɔre no gye nammono no bi ansa mpo na wɔde srade no abɔ afɔre ama Yehowa.—Lev. 3:3-5; 1 Sam. 2:13-17.
Dɛn na ɛboaa Samuel maa ne gyidi yɛɛ den wɔ ne mmofraase?
Ɔkwan bɛn so na Samuel gyidi boaa no ma otumi ko tiaa nkɛntɛnso bɔne?
Ɔkwan bɛn so na Samuel gyidi boaa no ma odii ehu so?
Nneɛma bɛn na wopɛ sɛ woyɛ de suasua gyidi a Samuel daa no adi no?